Breaking News: OPDOn’ Duris Meeshaadha; Oromoofi Oromiyaan Hinabdatu; Abadatees hinbeeku-Prof. Hisqeel - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosBreaking News: OPDOn’ Duris Meeshaadha; Oromoofi Oromiyaan Hinabdatu; Abadatees hinbeeku-Prof. Hisqeel
Breaking News: OPDOn’ Duris Meeshaadha; Oromoofi Oromiyaan Hinabdatu; Abadatees hinbeeku-Prof. Hisqeel
#OPDOn‘ Duris #Meeshaadha; Oromoofi Oromiyaan Hinabdatu; Abadatees hinbeeku-Prof. Hisqeel Gabbisaa’tu jedhe. #Oromoon Wallaggaas OPDO dhaan dhumaa jira jedhe Piroofeserri
KMN: Marii kutaa 2ffaa beektota oromoo prf.ISQI’EEL ,dr ITTAANAA, DR TSAGGAAYEE WALIIN
KMN;- marii prf. IZQI’EL,DR Tsaggaaye,fi DR Ittaanaa waliin godhame kutaa 1ffaa
Tulluu Taaddasaa **Itti Cufii** New Oromo Music 2019
OPDOn isaan kana warra alaabaa akaakilee fi abaabileen isaanii itti dhuman qabatanii Oromoo fi Oromiyaa malee jedhan , ABO fi Alaabaa keenya malee kan biraa hin feenu jedhan